Maamullada Puntland, Jubbaland iyo Galmudug, ayaa lagu celiyay xubnihii ay soo gudbiyeen, waxaana guddigu ka codsaday inay waafajiyaan qorshayaashii lagu hishiiyay.
Waxay sheegeen inaan lagu muujin qoondada haweenka, iyagoo codsaday in muddo labo maalmood ah dib lagusoo saxo arrintan.
Guddigu waxay u mahadceliyeen maamulka Koonfur Galbeed Somalia oo ay sheegeen inuu meel saaray qoondada dumarka.
Waxaa go'aankan oo soo baxay 09 October, 2016, lagusoo beegay xilli walaac ay muujinayeen qaar kamid ah dumarka Somaliyeed oo u arkayay in madaxda maamul goboleedyadu hareer mareen hishiisyadii lagu isku afgartay.
Lama oga sida go'aankan u dhaqan gali doono iyadoo mar kale madaxda Somalidu ku shiri doonaan magaalada Muqdishu.
Dadka odorasa siyaasadda Somalia, ayaa tallaabooyinka kasocda magaalada Xamar u arka inuu yahay qorshe dib u dhac loogu samaynayo doorashada waddanka Somalia lagu wado inay ka dhacdo sannadkan dabayaaqadiisa.
Majirto, waxa war ah oo kasoo baxay maamullada lagu celiyay liiskan.
Soomaliya 15.10.2016. 22:05
Warqado rasmi ah oo ku saxiixanyahay Michael Keating ayaa ayaa loo diray maamullada Jubbaland, Galmudug ...
​Daawo: Puntland oo ku dhawaaqday xubnaheeda Aqalka Sare
Puntland 08.10.2016. 19:32
​Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Somalia iyo taliyaal ciidan oo Cadaado tagay
Soomaliya 11.10.2016. 15:33